🥇 Za ajụjụ maka iwu iji mezuo
Ikwu oke: 4.9. Onu ogugu nke otu: 121
Video nke aza ajụjụ maka iwu mezuru
Dezie ajụjụ maka iwu iji mezuo
Onye njikwa ọ bụla na-elekọta ụlọ ọrụ ya na-achịkwa usoro nrụpụta niile, na-agbaso usoro mmezu nke iwu, na-eme ka ọrụ na nzukọ na ndị ọrụ dị mfe ma melite, na-ebelata ụgwọ. Naanị njikwa, njikwa, na mmezu nke iwu niile na-aza ajụjụ, ọ ga-ekwe omume iru ihe mgbaru ọsọ setịpụrụ na ịbawanye arụpụta yana n'otu oge uru. N'ebe a nke ọganihu nke teknụzụ, na-eburu asọmpi na-eto eto mgbe niile, ọ dị mkpa iwebata usoro akpaghị aka iji nye iwu 'mmezu, na-ebelata oge ejiri na ego. Mana, kpachara anya mgbe ị na-ahọrọ usoro nyocha, n'ihi na ọ ga-abụ ọ bụghị naanị ọsịsọ, kamakwa ịdị mma, akpaghị aka, ịba ụba na ọtụtụ ndị ọrụ, ebe ị naghị akwụ ụgwọ na ọkacha mma na enweghị ụgwọ ọnwa. Ì chere na ọ gaghị ekwe omume ịchọta ụdị usoro ndekọ ego ahụ? Njọ. Mmemme anyị pụrụ iche USU Software na-ezute ihe achọrọ nke onye ọrụ kacha mma nwere ihe ọmụma dị mkpa nke ngwanrọ ahụ, yana obere ego. Usoro ego na-agbazi onye ọrụ ọ bụla ngwa ngwa, na-eburu n'uche ọchịchọ onwe onye na ọnọdụ ọrụ. Ọnọdụ multiplayer anaghị emekwa ka ị na-eche ma na-enye ohere ịchekwa ego na ngwa ndị ọzọ. Ọnụ ego dị ala, na enweghị ụgwọ ego kwa ọnwa, na-egosipụtakwa mmemme anyị site na mmemme mmemme mmezu nke usoro a.
Isi ọrụ na ọrụ nke ụlọ ọrụ ọ bụla bụ ịza ajụjụ na ịchịkwa iwu. Ọ bụ igbu oge ha na njikwa overpayments bụ ntọala na mmelite nke ntụkwasị obi mmekọrịta na ndị ahịa, nke a bụ isi ihe ga-eme nke ọma. Ihe omume anyị na-akpaghị aka na-enye ohere ịmepụta usoro mmepụta niile, na-enyocha ma na-arụ ọrụ nke ọma nke mechara na oge, na-echebara ọkwa ndị anabatara na mbụ, n'ihi nyocha na onye nhazi ọrụ. N'ihi ya, n'ihi sistemụ arụmọrụ kọmputa, mmezu nke ọrụ site na arịrịọ ndị ọrụ belatara, na-eburu n'uche ihe kpatara mmadụ (nleghara anya, ike ọgwụgwụ, wdg). Site na ịrụ ọrụ oge ị na-aza ajụjụ, ọ bụghị naanị na ị na-ejikwa ọrụ nke ndị ọrụ, dabere na ụgwọ a na-agbakọ, kamakwa ịdọ ndị ọrụ aka na ntị.
Manọgide na-enwe tebụl dị iche iche na-enye ohere iji ozi dị elu tinye ozi ma chekwaa ya ruo ọtụtụ afọ. Ebubata data sitere na mgbasa ozi dị iche iche, nke na-ewebata ozi ma n'otu ntabi anya. Nke a bụ eziokwu mgbe ị na-arụ ọrụ na ntanetị, nke a na-ekesa na-akpaghị aka na tebụl na akwụkwọ akụkọ dị mkpa, na-enye ndị ọrụ ohere dabere na ọnọdụ ọrụ. Ugbu a, ọ gaghị ewe oge na mbọ dị ukwuu iji chọta ihe ndị ịchọrọ, na-eburu n'uche ojiji nke njikwa ọchụchọ ndị metụtara ya.
N'ezie, USU Software na-arụ ọtụtụ ihe ma nwee ike ịgbakwunye ya na modulu dị iche iche na arịrịọ gị, enwere ike ịchọta ya na weebụsaịtị anyị. Ọzọkwa, enwere ndepụta ọnụahịa na nkọwa nke usoro, yana nyocha ndị ahịa. Maka ajụjụ ndị ọzọ, ndị ndụmọdụ anyị nwere obi ụtọ ịdụ gị ọdụ na akara ekwentị egosiri.
Ihe ndekọ nke mmezu nke usoro ihe omume na-eme ka nchekwa na njikwa arụmọrụ zuru oke. Akpaghị aka na-arụ ọrụ na ngwa ngwa na-enye multitasking. Mmezu nke usoro dị iche iche na-aza ajụjụ, na-eleba anya na ndozi tebụl n'ụdị dị iche iche. Usoro ego nwere ọtụtụ atụmatụ dị iche iche dịka ọkwa na ncheta, mmezu nke iwu, na-efu nke onye nhazi ọrụ, ntinye data ntinye na mbubata, ụlọ nkwakọba ihe na ego, ọrụ dịpụrụ adịpụ site na iji ngwa mkpanaka, ọdịiche nke ikike onye ọrụ, nchekwa, na nhazi nke data na ihe nkesa di anya, adaba na camphor n'echiche obula, nghota nye onye oru obula, oru na ntaneti na mmezu oru, nyochaa onodu nhazi, uzo ndi otutu ndi mmadu mgbe ị na-enye uzo na okwuntughe. Mee ka ịdọ aka ná ntị dịkwuo mma na nlekota na nyocha nke ọrụ ndị ọrụ, na-eji nsuso oge na ijikọta na kamera vidiyo.
Uru ahụ nwere nyocha na igodo ụzọ dị mma. A na-eme nyocha na ọnụ ọgụgụ na-akpaghị aka. Enwere ike ịnabata ụgwọ ego na akwụkwọ na-abụghị ego. Site na nsonaazụ nke ọrụ ndị ọrụ, a na-agbakọ ụgwọ ọrụ. Nwere ike ịchọta ozi ngwa ngwa, na-eburu n'uche njikwa ọchụchọ ọchụchọ.
Ka ọ dị ugbu a, njikwa mmekọrịta ndị ahịa dị irè na-eji nwayọọ nwayọọ na-abụ usoro maka ịdị adị na-aga nke ọma na mmepe n'ihu nke ụlọ ọrụ nke oge a. Ebumnuche nke ụlọ ọrụ na imeziwanye mmekọrịta ndị ahịa bụ n'ihi ọtụtụ ọnọdụ, ọkachasị, asọmpi na-arịwanye elu, ịbawanye mkpa ndị ahịa maka ogo ngwaahịa ndị enyere na ọkwa ọrụ, mbelata arụmọrụ nke ngwa ahịa ọdịnala, yana mmalite nke teknụzụ ọhụrụ maka mmekọrịta na ndị ahịa na ịrụ ọrụ nkewa ụlọ ọrụ. Ọ bụ ya mere nsogbu nke ịhazi na ijide ọrụ dị irè na ndị ahịa dị ezigbo mkpa. Nke a na-eweta ihe ndị ọ chọrọ na ogo ọrụ, nke mbụ na akụkụ niile dịka ọsọ nke ọrụ ndị ahịa, enweghị njehie, na nnweta ozi gbasara kọntaktị onye ahịa mbụ. Enwere ike ịnweta ụdịrị ihe ndị a site na iji sistemụ arụmọrụ data akpaghị aka. Na ahịa sọftụwia ọgbara ọhụrụ, enwere ọtụtụ sistemụ maka idekọ iwu 'mezue, na-agbakọ ọnụ ọgụgụ ego na uru, mana imirikiti n'ime ha lekwasịrị anya na mpaghara isiokwu sara mbara ma ghara iburu n'uche nkọwa akọwapụtara nke otu. ụlọ ọrụ. Offọdụ n'ime ha enweghị ọrụ ndị dị mkpa, ụfọdụ nwere ọrụ 'mgbakwunye' nke enweghị isi na-akwụ ụgwọ, ihe a niile chọrọ mmepe onye ọ bụla maka ngwanrọ maka mkpa nke nzukọ ahụ. Agbanyeghị, na mgbagwoju pụrụ iche sitere na USU Software, ị ga-ahụ naanị ihe kachasị mkpa ma baa uru maka gị na ndị ahịa gị.